शास्त्र अनुसार हातको यो भाग हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ कि तपाईंको विवाह प्रेम की मागी ? – Enepali Samchar
November 19, 2020 adminLeaveaComment on शास्त्र अनुसार हातको यो भाग हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ कि तपाईंको विवाह प्रेम की मागी ?
काठमाडौँ । ज्योतिष शास्त्रको मान्यता अनुसार हाम्रो हातमा भएका बिभिन्न प्रकारका रेखाहरुले हाम्रो जिवनमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने बताएका छन्।
जन्मदा हातमा बनेका रेखाहरु खासै परिवर्तन नहुने पनि ज्योतिषहरुले बताएका छन् । यस्तै हातमा भएका रेखाहरुले मानिसको जिवनको भुत, भविष्य तथा बर्तमान स्पष्टसंग पढ्न सकिने ज्योतिष शास्त्रको दाबी छ।
हामा हुने जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, मणिबन्ध, सुर्य रेखा तथा बिवाह तथा सन्तान रेखा ले बिशेष महवका साथ जीवनसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने बताइएको छ ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार कुनै पनि ब्यक्तिको हस्तरेखा हेरेर नै मानिसको मागि बिवाह हुने कि प्रेम बिवाह भन्ने कुराको सहजै पत्ता लगाउन सकिने तथा भु भविष्य र बर्तमानको भविष्यबाँणी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै विवाह रेखासंग संम्बन्धीत रहेर सन्तान रेखा हुने भएकाले सन्तान कति हुने भन्ने भबिष्यवाणी गर्न सकिने बताइएको छ ।
कान्छी औँलाको तल भएको एउटा रेखालाई विवाह रेखा भनिन्छ । यसलाई बुध पर्वत पनि भनिन्छ । यस्तो बुध पर्वतको अन्त्यमा गहिरो रेखा हुने गर्दछ । तइसलाई ज्योतिष शास्त्रअनुसार विवाह रेखा भनेर चिनिन्छ । यस्ता प्रकारका विवाह रेखाहरु एक वा एक भन्दा बढी पनि हुन्छन् ।
यस्तो प्रकारको विवाहरेखा धेरै हुने ब्यक्तिहरु धेरैजनासंग प्रेम प्रसंगमा पर्ने ज्योतिषशास्त्रको दाबि छ । यस्ता प्रकारका विवाह रेखाहरु तलपट्टी गएको अवस्थामा उक्त ब्यक्तिको बैवाहीक जिवन त्यति सफल नहुने बताइएको छ ।
यदि कुनै स्त्रीको हातमा विवाह रेखाको सुरुमै टापु जस्तो आकार बनेको छ भने यस्ता महिलाले सौता बेहोर्नु पर्ने तथा झुक्याएर बिवाह गरिदिने खतरा उच्च हुने पनि ज्योतिश शास्त्रले बाएको छ । यस्ता महिलाहरुलाई स्वास्थ्य संबन्धी समस्याले सताउन सक्छ ।
यदि कुनै मानिसको हातमा विवाह रेखा लामो भएर सुर्य पर्वत सम्म पुगेको छ भने त्यस्ता मानिसको वैवाहीक जिवन अयन्तै सुखमय हुने तथा समृद्ध जिवनसाथी प्राप्त गर्दछन् । यसैगरी कसैको विवाह रेखा बिचमै काटीएको छ भने त्यस्ता मानिसहरु लाई विदुर वा विधवा हुने संकेत गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
विवाहरेखाजस्तै सन्तान रेखा पनि कान्छी औलाको तल्लो भागबाट नै शुरु हुने गर्दछ । सन्तान रेखा ठाडो हुने गर्दछ र यस्तो रेखाबाटै कुन मानिसको कति सन्तान हुने गर्दछन् भन्ने कुरा थाह हुने ज्योतिषशास्त्रको ठहर छ।
अनुभबी तथा दक्ष ज्योतिषविदहरुले अध्ययन गरि हेर्दा कति छोरा वा कती छोरी हुने भन्ने कुराको पनि पत्ता लगाउन सक्ने ज्योतिषबिद्हरुको भनाई छ।
खालि पेटमा लसुन खानुहोस् हुन्छ यस्ता चमत्कारिक फाइदा
श्रीमती मधुसंग घुमघाममा ब्यस्त महानायक राजेश हमाल (हेर्नुहोस् तस्वीर सहित)
फेसबुकले १ सेयर गरे वापत यो बाबुको उपचारकोलागि ५ रुपैया दिने भएको छ, औला चलाको भरमा कुनै गरिबलाई मदत मिल्छ भने पछि नहटौ